I-Bayer ihlehla ohlelweni lokuqukethe izimangalo zomdlavuza we-Roundup ezizayo - i-US Right to Know
IBayer ihlehla ohlelweni lokuqukethe izimangalo zomdlavuza zeRoundup ezizayo
Posted on July 8, 2020 by UCarey Gillam
Umnikazi weMonsanto uBayer AG uhlehla ohlelweni lokuqukatha izimangalo zomdlavuza zeRoundup zesikhathi esizayo ngemuva kokuthi ijaji lombuso likubeke kwacaca ukuthi ngeke lisamukele lolu hlelo, oluzobambezela izilingo ezintsha futhi linciphise nokuthathwa kwezinqumo zamajaji.
Uhlelo lwahlanganiswa nguBayer neqembu elincane labameli lafakwa ngenyanga edlule eNkantolo yesiFunda e-US esiFundeni saseNyakatho saseCalifornia njengengxenye yomzamo weBayer wokuqeda ukuqulwa kwamacala osekuholele ekulahlekelweni kathathu ezinkantolo ezintathu zamajaji, okumangazayo imiklomelo yomonakalo wokujeziswa nokunganeliseki kwabaninimasheya. Abantu abangaphezu kwe-100,000 e-United States bathi ukuvezwa kwe-Monsanto's glyphosate-based Roundup herbicides kubangele ukuthi bathuthukise i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) nokuthi iMonsanto kudala yazi futhi yafihla izingozi zomdlavuza.
NgoMsombuluko iJaji uVince Chhabria ikhiphe umyalo ukubeka ukulalelwa kwalolu daba ngoJulayi 24 futhi wakwenza kucace ukuthi ngeke alwamukele uhlelo lokukhokhelwa. "Wayengabaza ukufaneleka nobulungiswa bendawo yokuhlala ehlongozwayo," kubhala uChabria kulo myalelo.
Ngaphambi kwesinqumo sejaji, amaqembu amaningi afake izaziso zokuphikisana nohlelo lweBayer; icaphuna “ukuphambuka okukhulu emikhubeni ejwayelekile” wabiza indawo yokuhlala ehlongozwayo.
Eziphendulela, ngoLwesithathu iqembu labameli ebelihlele isivumelwano neBayer wafaka isaziso sokuhoxa kwecebo labo.
Uhlelo lokukhokhelwa okuhlongozwayo lwamacala ezinyathelo zesikhathi esizayo lwaluhlukile esivumelwaneni sokukhokha uBayer asenza nabameli babamangali asebevele bafaka amacala futhi enzelwe ukusiza iBayer ukuba iqukathe futhi iphathe isikweletu esizayo. Ngaphansi kwesakhiwo esihlanganiswe yiBayer kanye neqembu elincane labameli babamangali ukulungiswa kwesenzo sekilasi bekuzosebenza kunoma ngubani odalulwe ku-Roundup ongazange afake icala noma agcine ummeli kusukela ngoJuni 24, 2020, noma ngabe lokho umuntu usevele utholakale enomdlavuza abakholelwa ukuthi kungenxa yokuchayeka kweRoundup.
Lolu hlelo beluzobambezela ukufakwa kwamacala amasha iminyaka emine, futhi lucele ukuthi kusungulwe “iphaneli lesayensi” elinamalungu amahlanu elizothatha noma ikuphi okutholakele esikhathini esizayo mayelana nezicelo zomdlavuza ezandleni zamajaji. Esikhundleni salokho, kuzosungulwa i- “Class Science Panel” ezonquma ukuthi ngabe i-Roundup ingadala i-non-Hodgkin lymphoma, futhi uma kunjalo, ngamazinga aphansi okuvezwa. IBayer izokwazi ukuqoka amalungu amabili kwamaphaneli amahlanu. Uma ngabe iphaneli linqume ukuthi akukho ukuxhumana okuyimbangela phakathi kwe-Roundup ne-non-Hodgkin lymphoma lapho-ke amalungu ekilasi azovinjelwa ekufuneni okuzayo esikhathini esizayo.
IJaji uChhabria waphikisana nawo wonke umqondo wesigungu sesayensi. Ku-oda lakhe, ijaji labhala:
“Endaweni lapho kungenzeka ukuthi isayensi ithuthuka, bekungafaneleka kanjani ukuthi kuvalwe isinqumo esivela kuphaneli lososayensi kuwo wonke amacala azayo? Ukuhlola, cabanga ukuthi iphaneli linquma ngo-2023 ukuthi i-Roundup ayikwazi ukudala umdlavuza. Bese ucabanga ukuthi isifundo esisha, esinokwethenjelwa sishicilelwe ngo-2028 okusicekela phansi kakhulu isiphetho sephaneli. Uma umsebenzisi we-Roundup kutholakala ukuthi une-NHL ngo-2030, kufanelekile yini ukubatshela ukuthi baboshwe yisinqumo sephaneli sango-2023 ngoba akazange aphume esivumelwaneni ngo-2020? ”
IBayer ithe izobeka eceleni u- $ 1.25 billion ngaleli lungiselelo. Le mali izosetshenziselwa ukunxephezela amalungu ekilasi atholakale ene-NHL "ngemiphumela yokulibaziseka" kwamacala, nokuxhasa ucwaningo ngokutholakala nokwelashwa kwe-NHL, phakathi kokunye.
Abameli babamangali ababeka lolu hlelo ndawonye neBayer bama ukwenza imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 150 ngemali ekhokhwa yiBayer. Akuwona amafemu abameli afanayo ahole ukumangalelwa kuze kube manje. Leli qembu lamafemu omthetho lifaka phakathi uLieff Cabraser Heimann & Bernstein; Ukucwaningwa kwamabhuku & nozakwethu; I-Dugan Law Firm; nommeli uSamuel Issacharoff, uReiss Professor wezomthetho-sisekelo eNew York University School of Law.
Amalungu amaningana ezinkampani zabameli abahola phambili abawine izivivinyo ezintathu zomdlavuza weRoundup aphikisana nohlelo lokuxazululwa kwezigaba ezihlongozwayo, bethi luzonciphisa abamangali besikhathi esizayo amalungelo abo ngenkathi kunothisa labo abanye abameli abebengakaze babe phambili ecaleni leRoundup.
Akucaci ukuthi ukuhoxiswa kwalolu hlelo lokuhlonza izigaba ezihlongozwayo kungaba nomthelela onjani ekuhlawulisweni okukhulu kwezimangalo ezikhona. Bayer kusho inyanga edlule izokhokha kuze kufike ku- $ 9.6 billion ukuxazulula cishe amaphesenti angama-75 ezicelo zamanje futhi izoqhubeka nokusebenza ukuxazulula okusele. Lokho kukhokhelwa akudingi ukuvunywa yinkantolo.
IBayer ikhiphe isitatimende ngoLwesithathu ithi ihlale "izibophezele kakhulu esinqumweni esizobhekana ngasikhathi sinye namacala afanele kanye nesisombululo esisebenzayo sokuphatha nokuxazulula amacala angaba khona esikhathini esizayo."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, Bayer, California, izinkantolo, imvelo, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi